Kuyacathuleka ezintokazini ezingabafuyi ezixosha ikati eziko emindenini yazo. Baxoxe noTEBOGO MOKWENA - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
ONksz uMpho Serabele noDimakatso Ngoveni baqhamuka emakhaya ahlwempu, nokungakho bezimisele ukuqeda ububha ngebhizinisi labo. “Okokuqala besifuna ukutshengisa ukuthi abantu besifazane bayakwazi ukusebenza ndawonye futhi baphumelele. Loku bekubalulekile kithina ngoba abantu besifazane bavame ukungakwazi ukwesekana,” kusho uNksz uSerabele exoxa neVutivi News.
UNksz uNgoveni unanele ngokuthi: “Besifuna nokuqikelela ukuthi abantwana bethu nabantwana babo nekusasa labantwana babo livikelekele ngendlela yokuthi bangasokoli ngendlela thina esahlupheka ngayo.”
UNksz uNgoveni uyi-clinical psychologist ezisebenzayo kanti uNksz uSerabele usebenza ebhange. Laba besifazane bobabili balixhase bona ibhizinisi beshaya emaphakatheni abo.
“Kwakunzima kwesizwana nabo ngoba kwakumele sichaze ukuthi imali okufanele ngabe siyisebenzisela izindleko zasendlini izoya epulazini,” kulanda uNksz uSerabele.
Ipulazi labo liseNorth West kanti imikhiqizo yalo idayisa kakhulu eGauteng ezindaweni ezinjengaseGoli naseKurhuleni. Badayisa izinkukhulu eziphilayo, ezichuthiwe zapakishwa, amaqanda, okwangaphakathi kwenkukhu namakhanda.
Izinkukhu zeTwin Chicks sezilungele amakhasimende
Ipulazi labo liqashe abantu abathathu. Bathe nakuba bengabangani kodwa sebefunde ukuhlukanisa umsebenzi nobungani.
“Siyakujabulela ukusebenzisana ngoba asinqeni ukutshelana uma kukhona ohudula izinyawo. Siyakwazi nokukhuthazana ngezikhathi ezinzima,” kusho uNksz uSerabele.
Enye yezinselelo ababhekana nazo ngasekuqaleni wukuhlupha kwamakhasimende nezisebenzi. “Sasithola amakhasimende ayefaka ama-oda kodwa uma sesiwahambisele abakuthengile kwakuba nzima ukuthi akhokhe,” kukhumbula uNksz uSerabele.
Bathe abasadilivi uma umuntu engakhokhile. Okunye abathi kubahluphile wukuba nezisebenzi ebezingawuqondi umbono wabo nebezizenzela umathanda ngoba inkampani kungeyona eyazo. Nokho bathi ukuba nomhlaba wabo kubasize kakhulu.
“Ukukwazi ukuthi sisheshe sibe nomhlaba sisanda kuliqala ibhizinisi yinto enkulu, ikakhulukazi ngoba kuyaziwa ukuthi yinto okungelula ukuthi yenzeke embonini yezolimo,” kusho uNksz uNgoveni.
Isifiso sabo wukufuya nokukhulisa izinkukhu ezizalela amaqanda kodwa okwamanje bathi basagxile ekuphuculeni ubuchule babo balezi ezifuyelwa inyama.